DHIBCAHA LAYSKU ARKO CALEEMAHA ORCHID, WAXA LA SAMEEYO: SIDA LOO DAWEEYO DHIRTA, SABABTA AY UGU DABOOLI KARTO UBAXYADA CAD EE HOOSE IYO SIDEE LOOLA DHAQMI KARAA HADDII TANI DHACDO? - SOOSAARKA DALAGGA
Maxaad ku samayn kartaa orchid, haddii dhibco dhajisu u muuqato caleemo? Gargaarka koowaad iyo daaweyn dheeraad ah
Qaar badan oo ka mid ah beeralayda ayaa la kulmay dhibaatada muuqaalka kore ee dhibcaha dhegaha on caleemaha iyo ubaxa of orchids jecel. Tani waxay ku dhici kartaa sababo kala duwan: cudurada ubaxa, soo bixitaanka cayayaanka, xaaladaha cimilada oo sii xumaanaya, ama muuqaalka muuqaalka nectar dhirta iyo ka saarida qoyaanka xad-dhaafka ah. Si kastaba ha noqotee, go'aaminta iyo ficil dheeraad ah, waa muhiim in la ogaado sababta uu u dhacay iyo sida loo daweeyo geedka.
Sidee loo fahmaa in dhirta u baahan tahay caawimaad?
Haddii dhibco dhajis ahi ay ka muuqdaan dhirta, inta badan kani waa calaamad muujinaysa in orchid jiran tahay waxayna u baahan tahay daaweyn.
Iyadoo aan, caleemaha buka ma awoodi doonaan inay siiyaan dhirta maaddooyinka lagama maarmaanka ah. Si sax ah loo qiimeeyo sababaha muuqaalka dhibcaha, waa inaad si taxadar leh u tixgelisaa.
Calaamadaha cudurada dhirta:
caleemaha la daboolay ubaxyada cad;
muraayado cad ayaa u muuqday gudaha dhibcaha;
ee dhibcood iyo caleemaha waa cobweb cad;
cayayaanka (marka laga reebo aallada).
Calaamadahaas oo dhan waxay tilmaamayaan cudur ama infakshan ubax ah. Sidaas waxaad samayn lahayd haddii caleemaha dhoobada ah ama ubaxyada u muuqda on orchid?
Sidee loo daweeyaa ubaxyada iyo cagaarka?
Kala saarista cayayaanka aan cayayaanka lahayn ama cayayaanka
Waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro warshadda xaaladaha ku haboon ee xabsiga.
Go'aami heerka qoyaanka ciidda. Haddii substrate uu dillaaco, adag yahay oo cufan, oo uu joojiyay xadiga hawada loo baahan yahay ee xididdada, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in lagu daaweeyo lakabka sare iyo hagaajinta dheecaanka. Iyada oo muuqaalka muuqaalka karsan ama ur xun, waa lagama maarmaan si loo beero geedka carrada cusub. Si looga hortago, orchid waa in aan lagu soo celin midabyo kale ugu yaraan laba toddobaad.
Inaad ka fogaato khatarta qorraxda tooska ah.
Kordhi heerkulka hawada oo yaree biyaha.
Isticmaal hygrometer si aad u ilaaliso heerkulka iyo qoyaanka. Marka qoyaanku yar yahay, ku dhaq biyo diirran, waxay kaa caawinaysaa in aad ka saarto harta cad cad iyo dhajinta iyo dib u soo celinta heerarka loo baahan yahay qoyaanka.
Kaba saarista cayayaanka
Siyaabaha looga takhalusi karo:
Ku wareeji ubaxa meel kulul. Iyada oo ay sabab u tahay heerkulka sare, cayayaanka ayaa ka dhaqaaqi doona dhinaca hoose ee caleemaha ilaa dhinaca sare.
Si taxadar leh u tirtir dhamaan caleemaha labada dhinac ilaa dhibcaha iyo lakabka si buuxda u baaba'aya.
Xayawaanka qaba iyo jaranjarada dhirta.
Ku dhaq oo tirtir dheriga qalalan.
U beddel asaasiga.
Karantiilka toban ilaa shan iyo toban maalmood.
Nadiifi meesha uu ubaxa ku yaal. Gaar ahaan dareenka daaqadaha iyo qaybta hoose ee xayawaanka daaqadda.
Haddii ay dhacdo dhaawac aad u daran geedka, daawooyinka gaarka ah ayaa loo isticmaali karaa.
Kala saarista dhibco dabacsan iyo lakab oo ay sababeen cuduro
Ku dhaji warshadda karantiilka.
Suufka si aad u tirtirto caleemaha hoose iyo sare si aad uga saarto dhibcaha iyo ubaxyada.
Ku daawee dhirta xal saliid ah (ku dar hal litir oo biyo diiran leh laba qaado oo saliid saytuun ah). Wax-qabadka lagu fuliyay tuubo.
Haddii ay dhacdo infekshan halis ah, waxaa habboon in laga saaro caleemaha dhintay iyo bedelida substrate.
Haddii loo baahdo, isticmaal daroogo.
Kala saar dhirta kale laba toddobaad.
Si looga hortago dib u soo noqoshada dhibcaha dhegaha, waa in aynaan ilaawin sababta ay u dhici karto geedka.
Waa lagama maarmaan in la helo xaaladaha ugu wanaagsan ee koritaanka iyo horumarka ubaxa.
Si joogta ah ayey u qiimeeyaan jeermisyada iyo dulinka.taas oo keeni karta mid adag.
Haddii dhibco ay soo baxaan isla markiiba ka dib markaad waraabisid, tani waa dabiiciga dabiiciga ah ee warshadda - maaha wax qiimeyn ah oo ku saabsan. Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la isticmaalo xilliga baxnaaninta, macnaheedu waa in la xoojiyo nidaamka difaaca.
Ka dib markaad ka baxdo karantiin, hilib kala duwan ayaa lagu darayaa waraabinta.. Inta badan oo si taxadar leh waxaad u eegtaa orchid, fursadaha badan ee lagu ogaanayo kala-guurka marxaladaha hore iyo iyaga tirtiraya ka hor inta aanay noqon dhibaato dhibaato.
In la ilaaliyo tallaabooyinkan aan adageyn, ilaalinta daryeelka iyo xaaladaha heerka saxda ah, horumarinta caafimaadka, korniinka iyo ubaxyada ayaa la helayaa.